theZOMI: [moemakadaily@moemaka.biz] 27th March - MoeMaKa Daily
[moemakadaily@moemaka.biz] 27th March - MoeMaKa Daily
Posted by Maung Yit at 5:17 PM0comments
SF Bay Area Burmese to pray for Peace in Burma at 88 Ko Htay Kywe Event
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၃
လာမည့် မတ် ၂၉၊ သောကြာနေ့ညနေခင်းတွင် ကျင်းပမည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သော ကိုဌေးကြွယ်နှင့် ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမျိုး ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး၊ နားလည်မှု ထူထောင်ရေး၊ ခိုင်မြဲရေးကို ရည်စူးပြီး စုပေါင်း ဆန္ဒပြုဆုတောင်းမည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းမည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် မြန်မာပြည်သား အားလုံး ဆင်းရဲဒုက္ခများ ရင်ဆိုင်နေရသည်ကို ကိုယ်ချင်းစာနာမှုများ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အားလုံးအတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပြီး တရားမျှတသော ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင် ထူထောင်ကြရေး ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စုပေါင်းဆုတောင်းကြမည်ဟု အခမ်းအနားစီစဉ်သူတို့က သဘောထားကို ပြောကြားသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ စုပေါင်းနေထိုင်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုကို မြန်မာပြည်တွင် ယခင်လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကတည်း သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် မြန်မာလူထုတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ကြရန် လက်ရှိအခြေအနေ အဖြစ်အပျက်တို့က လိုအပ်ချက်ပြယုဒ်အဖြစ် ပြနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများ၊ ဘာသာဝင်ပေါင်းစုံများ၊ ဒေသအသီးသီးက မြန်မာပြည်သားများအားလုံးအနေဖြင့် မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အားလုံးအတူတကွ သင့်မြတ်စွာ လက်တွဲပြီး ထူထောင်ကြရေးကို ထုတ်ဖော်ကြရန်၊ ဖော်ပြကြရန် မြန်မာပြည်သူတို့နှင့်အတူ ရပ်တည်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ဆုတောင်းကြမည် ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာကွန်မြူနီတီနှင့် ကိုဌေးကြွယ် တွေ့ဆုံပွဲ စီစဉ်သူတဦးဖြစ်သူ ကိုထွန်းမြတ်ဦးက မိုးမခကို ပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဧည့်ပရိသတ်တို့ထဲမှ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ အတူတကွ စုဝေးကြပြီး မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အားလုံးအတူတကွ သင်ြ့မတ်စွာ လက်တွဲရေးတို့အတွက် ဆုတောင်းခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်ဟု ပဏမစဉ်းစားထားသည်ဟု သိရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်သည် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုများနှင့် မတ် ၂၉၊ သောကြာနေ့ ညနေ ၅ နာရီ မှ ၉ နာရီတွင် မိတ်ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်။ အခမ်းအနားကို မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား လူမျိုး ဘာသာမရွေး လွတ်လပ်စွာ တက်ရောက်ရန် ကြိုဆိုထားသည်။ ညနေစာကိုလည်း အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းမှုဖြင့် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံမည် ဖြစ်သည်။ ၀င်ကြေးသတ်မှတ်ကောက်ခံခြင်း မရှိ။ စေတနာအလျောက် ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးမှုများဖြင့် ကိုဌေးကြွယ်ကို ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။ ဖရီးမောင့်မြို့ မြန်မာမိသားစုများ စုဝေးနေကြ Centerville Community Center (93355 Country Dr. Fremont, CA 94536) (880 Free Way, Mowry Ave Exit, Left on Fremont, Right on Country Drive) မှာ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
Posted by Maung Yit at 5:04 PM0comments
Saw Min Wai - Cartoon
ကာတွန်း စောမင်းဝေ၏ ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။
Posted by Aung Htet at 9:03 AM0comments
Labels: ကာတွန်း - စောမင်းဝေ
From "The Second Coming" poem by
W. Butler. Yeats (1865 -1939), Irish Poet, 1919.
အာဖရိက ခေတ်သစ် စာပေရဲ့ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးလို့ သတ်မှတ်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ဂျီရီးယား စာရေးဆရာကြီး "Chinua Achebe (1930-2013)" ရဲ့ နာရေး သတင်းကို ဟိုတနေ့က နိုင်ငံတကာသတင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ သူရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေး ဝတ္ထု "Things Fall Apart (1958)" နာမည်ကိုလည်း သတင်းမှာ ပြန်ဖတ်ရတယ်။ တဆက်တည်း အဲဒီ ဝတ္ထု ခေါင်းစဉ်ယူဖို့ စိတ်ကူးရတဲ့ "Yeats" ရဲ့ ကဗျာ စာသားတွေလည်း ဒီရက်ပိုင်း ခေါင်းထဲ ရောက်လာတယ်။
အမှန်တော့ "Things Fall Apart" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေ ကတည်းက ဗမာပြည်က တက်လာတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် စိတ်ထဲမှာ ရောက်ရှိနေခဲ့တာပါ။ တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ အဲဒီ စာသားကိုယူ ဝတ္ထု ရေးဖူးတဲ့ စာရေးဆရာကြီးကပါ ဆုံးရော..။ ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ နဲ့ စာရေးဆရာ ဟာ "Things Fall Apart" စကားလုံး ကို သူတို့ရဲ့ ကဗျာ နဲ့ ဝတ္ထု မှာ သူတို့ စိတ်ကူး၊ သူတို့ အတွေး နဲ့ ပုံဖော်ခဲ့တယ်။ သူတို့ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ခေတ်၊ သမိုင်း နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို သူတို့ မြင်သလို၊ သူတို့ အယူအဆ၊ ခံယူချက် နဲ့ သူတို့ ရသဟန် ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ကဗျာက ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး ဥရောပရဲ့ ခေတ်အခြေအနေ၊ ဝတ္ထုက ဗြိတိသျှ အင်ပါယာ လက်အောက် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ အရင်းရှင် စနစ် နဲ့ ဗျူရိုကရက်တွေကြောင့် ပြိုကျပျက်စီး သွားခဲ့ရတဲ့ အာဖရိက လူမျိုးစုတွေရဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့၊ ထုံးတမ်း၊ စနစ် အကြောင်း အသီးသီး ပုံဖော်ခဲ့ကြတယ်။
ခုတော့ လက်ရှိ လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ အမုန်းတွေ အပြည့်၊ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် လုပ်ရပ်တွေ အပြည့် ဖြစ်နေတဲ့ ဗမာပြည် နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို "Things Fall Apart" ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ပဲ ပုံဖော်ချင်မိတယ်။
● အရာရာ ပြိုလဲခြင်း
ကျရှုံးနိုင်ငံ (ဝါ) "A Failed State" / "A Failing State" တခုကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီး သူ့ရဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာတွေကို ကြည့်ရင် တိုင်းပြည်ကို တာဝန်ယူ စီမံခန့်ခွဲ၊ အုပ်ချုပ်ရတဲ့ မင်းအစိုးရတွေ ညံ့ဖျင်းမှု၊ ကိုယ်ကျိုးရှာမှု နဲ့ လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက် (သို့) အုပ်စုတစု (သို့) လူတန်းစားတစုကသာ အစစ အရာရာ ချုပ်ကိုင်၊ လွှမ်းမိုး၊ အခွင့်ရေးယူ၊ အကြွင်းမဲ့ အာဏာရယူနေမှုတို့ကြောင့် တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေး/စီးပွားရေး/လူမှုရေး တည်ငြိမ်မှုတွေ ပျက်ပြားနေခြင်း၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု အဆမတန် မြင့်မားနေခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးစနစ် အပါအဝင် လူထုဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေ အားလုံး ယိုယွင်းပျက်စီးနေခြင်း၊ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု နဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ များပြားနေခြင်း၊ စီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ စစ်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လူမျိုး/ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းစေမှုကြောင့် ဖြစ်စေ လူအုပ်စု အမြောက်အများ မိမိနေရပ်ဒေသကို စွန့်ခွာပြီး ဒုက္ခသည်အဖြစ် အများအပြား ခံယူနေရခြင်း အစရှိတဲ့ နိုင်ငံ ပျက်စီးနေခြင်းကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေကို တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။
တနည်းအားဖြင့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ် ယိုယွင်း၊ ခြစား ပျက်စီးနေခြင်း အပြင် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ ညွှန်းဆိုလေ့ကြတဲ့ စာနယ်ဇင်း၊ သတင်း၊ မီဒီယာ လုပ်ငန်းကပါ မလွတ်လပ်၊ အရည်အချင်း မပြည့်မီ၊ ကျင့်ဝတ်သီလပိုင်း အားနည်းနေခြင်း၊ စာပေ၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ၊ ရုပ်ရှင် အစရှိတဲ့ လူသားအတွက် စိတ္တအာဟာရ ရသပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်တဲ့ အနုသုခုမ ပညာရပ်တွေ မထွန်းကား၊ မစည်ပင်၊ လူထုကို တော်တည့်မှန်ကန် ပညာပေး လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှု မပြုနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပျက်ယွင်းမှု သဘောတွေကို တွေ့ရှိရတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စာရိတ္တ မဏ္ဍိုင်ကိုပါ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်၊ ပျက်စီး၊ ယုတ်လျော့လာစေသလို လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အမြင်၊ သဘောထား နဲ့ အပြုအမူတွေကို မှောက်မှား လမ်းလွဲစေတယ်။
● အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ လက်ဆောင် (သို့) အမွေဆိုး
အထက်မှာ ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ "ကျရှုံးနိုင်ငံ" (ဝါ) "အရာရာ ပြိုလဲခြင်း" ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် နဲ့ လက္ခဏာတွေကို စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုင်းပြည်မှာ ဆယ်စုနှစ် (၅) စု ကျော် ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အထင်အရှား တွေ့နိုင်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် နဲ့ စစ်အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ရဲ့ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် စစ်အုပ်စု နဲ့ အပေါင်းအပါ လူတစု သူတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် တိုင်းပြည်မှာ ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေ၊ သွတ်သွင်းခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ သဘောတရားတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ဟာ လူမှု၊ စီးပွား၊ ကျန်းမာ၊ ပညာ၊ ကျင့်ဝတ်၊ အတွေးအခေါ် အဘက်ဘက်က ချွတ်ခြုံကျ အားနည်း၊ ချို့တဲ့ မှားယွင်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ သူတို့ အာဏာ နဲ့ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍအသီးသီးကို စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့ အထဲမှာ အယုတ်မာဆုံး နဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ဖျက်ဆီးမှုကတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့မှုပဲ ဖြစ်တယ်။
● တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရုပ်ပုံလွှာ လက္ခဏာ ယုတ်လျော့သွားခြင်း
But, if character is lost, EVERYTHING is LOST."
ငယ်စဉ်က ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေမှာ လူ့စရိုက်၊ လူ့အကျင့် အကြောင်း စာစီကုံးရင် အထက်က စာစုလေးကို ကိုးကားရေးလေ့ရှိကြတယ်။ ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာ၊ ဓန ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ဆုံးရှုံးခြင်း နဲ့ "အာရောဂျံ ပရမ္မံလာဘံ – ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတပါး" လို့တောင် မှတ်ယူရတဲ့ ကျန်းမာရေး သုခ ဆုံးရှုံးခြင်း တွေထက် လူ့ရဲ့ အကျင့်၊ စာရိတ္တ ဆုံးရှုံးရင် အရာရာ အားလုံး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးခြင်းလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ လူတဦးချင်းမှာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ အကျင့်၊ စာရိတ္တ၊ စရိုက် လက္ခဏာ ဟာ အရေးကြီးဆုံးပဲ ဖြစ်သလို တိုင်းပြည် တပြည်၊ လူမျိုး တမျိုးမှာလည်း သူများ လူမျိုးနဲ့ မတူ ထူးခြားကွဲပြားတဲ့ သွင်ပြင်၊ စရိုက်၊ လက္ခဏာ "Identity" ဟာ အရေးပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး လက္ခဏာ "Identity" အပေါ်မူတည်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့ ပုံရိပ် "Image" ကို သုံးသပ်နိုင်တယ်။ ဗြိတိသျှလူမျိုးတွေက အချိန်လေးစားတယ်၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေက စည်းကမ်းရိုသေ၊ အလုပ်ကြိုးစားတယ်၊ အစရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေနဲ့ ကမ္ဘာမှာ ကျော်ကြားသလို ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နာကြား၊ မှတ်ယူရင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူမှု၊ စီးပွား ဘဝမှာ လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဗမာတွေဟာ မေတ္တာတရားကြီး၊ ယဉ်ကျေးပျူငှာ၊ ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်အပြည့် နဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ် ငြိမ်းချမ်းအေးဆေး နေလိုတဲ့ လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာအလယ်မှာ ထင်ရှား အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတယ်။
"Always wearasmile and show great hospitality and kindness towards the foreigners, tourists, and strangers even though life under the military dictatorship is far from easy."
စာရေးသူဟာ မိမိ လူမျိုး၊ မိမိ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ပြုပြင်နိုင်အောင် ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကလေးတွေ၊ အားနည်းချက်ကလေးတွေ၊ ဆင်ခြင်စရာကလေးတွေကို စာရေးသူရဲ့ ဗမာလိုရေး ဆောင်းပါးတွေမှာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် အစွမ်းရှိ၊ သိမြင်နားလည်သလောက် ထည့်သွင်း ထောက်ပြလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ စကားပြောဆိုရင်တော့ အမြဲလိုလို ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေကို ပြောပြလေ့ရှိတယ်။ ပြောလေ့ရှိတာ တခုက "…ပဒေသရာဇ်ခေတ် နဲ့ အာဏာရှင်ခေတ် တလျှောက် တိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာ နဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ် 'ထီးထီးကြီး' နေလေ့ရှိတဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် လူမျိုးရဲ့ စရိုက်ဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးတွေ အပေါ် ပျူငှာမှုရှိတယ်၊ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်လေ့ရှိတယ်၊ မေတ္တာတရားကိုသာ ပြသလေ့ရှိတယ်…" ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်။
"No one chops off their arms or beheads each other
because their ancestors belong to different tribes."
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ လူမျိုးပေါင်းစုံ မှီတင်းနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟိုးယခင် ပဒေသရာဇ်ခေတ် နဲ့ မျက်မှောက် စစ်အာဏာရှင်ခေတ်တွေမှာ လူမျိုးစုအချင်းချင်းကြား စစ်ပွဲတွေ၊ အမုန်းတွေ ရှိခဲ့/ရှိနေပေမယ့် ယေဘုယျ သဘော၊ စိတ်ရင်းအနေနဲ့တော့ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ အာဖရိကမှာ တွေ့မြင်ကြုံရလေ့ရှိသလို "မျိုးနွယ်စု မတူလို့ တယောက်ခေါင်း တယောက် မဖြတ်ဘူး၊ တယောက်လက် တယောက် မခုတ်ဘူး.." ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် စာရေးသူရဲ့ နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေတွေကို အလေးအနက်ထား ပြောပြလေ့ရှိတယ်။
သွေးဆူလွယ်တဲ့ ရာသီဥတု နဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ခေတ်စနစ်တွေကို ဖြတ်သန်းရပေမယ့် ဗမာ့ဓလေ့၊ ဗမာ့စရိုက်၊ ဗမာ့စိတ်ရင်းဟာ ဘာသာတရား အဆုံးအမ ကျေးဇူးနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကြီး၊ အမုန်းနည်း၊ အလိုလောဘ နည်း၊ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်၊ သည်းခံ၊ အေးဆေး ငြိမ်းချမ်း၊ အင်မတန် ယဉ်ကျေးကြတယ်လို့ နာမည်ကောင်းရတယ်။
ဗမာတွေဟာ၊ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်း၊ မကုံလုံ၊ မကြွယ်ဝပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဘယ်တုန်းကမှ အောက်တန်းမရောက်ခဲ့၊ မဆင်းရဲခဲ့ဘဲ ပြည့်ဝချမ်းသာရှိကြတယ် ရယ်လို့ ကမ္ဘာအလယ်မှာ မော်ကွန်းထိုး၊ ကမ္ပည်းတပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးမှာ ရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာ အမှတ်အသား ဖြစ်တယ်။
Martin Luther King, Jr. (1929-1968),
African-American Civil Rights Movement Activist.
ဒါပေမယ့် ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဂုဏ်ရည် "Identity" နဲ့ ပုံရိပ် "Image" ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရေရှည်ကြီးဆိုးခဲ့ခြင်း အကျိုးဆက်အနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ယုတ်လျော့လာခဲ့ရတယ်။ "အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မယ်" ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ လက်တွေ့ အသုံးကျ လမ်းညွှန်စကားလို ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စာရိတ္တ မဏ္ဍိုင်ဟာ အကြီးအကျယ် ကျဆင်းလာခဲ့ရတယ်။
အလားတူပဲ စစ်အာဏာရှင်တွေ အာဏာ သက်ဆိုးရှည်ရေး အတွက် လူအများစု ထောက်ခံမှုရအောင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကို ခုတုံး လုပ်တဲ့ တဘက်စောင်းနင်း အပြုအမူတွေ၊ စနစ်တွေ၊ စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ပညာရေးစနစ် အစရှိတဲ့ ကြားခံပစ္စည်း အမျိုးမျိုးနဲ့ လူထုကြား မှိုင်းတိုက်၊ သွတ်သွင်းခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အစရှိတဲ့ တရားမဲ့၊ မူမမှန်တဲ့ သဘောထား၊ အမြင်တွေဟာလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဝမ်းနည်းဖွယ် ရှင်သန်လာပြီး ဗမာ့မူရင်း စိတ်ဓာတ် ချစ်ခင်ပြူငှာမှု၊ မေတ္တာ နဲ့ ခန္တီတရားဟာ တဖြည်းဖြည်း ထိပါး၊ ဖျက်စီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လူနည်းစု ဘာသာ/လူမျိုးကွဲ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘိုးစဉ်၊ ဘောင်ဆက် ကတည်းက နိုင်ငံခြား မှ လာရောက် အခြေချနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ လူနည်းစု ဘာသာ/လူမျိုးခြား နိုင်ငံသားတွေ အပေါ် ကြီးစွာသော လူမဆန်မှု၊ ရမ်းကားမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဂုဏ်တခုအလား စနစ်တကျ ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။ ကာယကံမြောက် မကျူးလွန်ကြသူများမှာလည်း ဒီလိုအနေအထား၊ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဖြစ်သင့်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတရပ်လို လျစ်လျူရှု ထားနိုင်ရက်မှုကို အနည်း၊ အများဆိုသလို မျက်မှောက် ဗမာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဝမ်းနည်းဖွယ် တွေ့မြင်လာရတယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ် နဲ့ သဘောဟာ လက်ရှိ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အစွဲတွေ၊ အမုန်းတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ရဲ့ အကြောင်းရင်းခံပဲ ဖြစ်တယ်။
စာရေးသူ ရဲ့ မိသားစု မိတ်ဆွေ အိန္ဒိယအနွယ် တက္ကသိုလ်ကထိက ဆရာကြီး တယောက် ဆိုရင် "ကျွန်တော်တို့က ဗမာတွေ နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းလွန်းလို့ သူတို့နဲ့ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ၊ ချစ်ခင်၊ သူတို့နဲ့အတူ 'ငါးပိ' စားပြီး ဒွေးရောယှက်တင်၊ ဒိုးတူပေါင်ဖက်၊ အေးအတူ ပူအမျှ၊ ဒွန်တွဲ နေထိုင်လာခဲ့ပေမယ့် စနစ်အဖွဲ့အစည်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားအနေနဲ့ပဲ တဆင့်နှိမ့် ခွဲခြား၊ ဖိနှိပ် ဆက်ဆံတာပါပဲ.." ဆိုပြီး ကြေကြေကွဲကွဲ ရင်ဖွင့်ပြောဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားဖူးခဲ့တယ်။
● စနစ်ကနေ စိတ်ရင်းကိုပါ ကူးစက်ပြီ
အခု အခြေအနေရောက်လာတော့ ပိုဝမ်းနည်းဖို့ နဲ့ စိုးရိမ်ဖို့ကောင်တာက အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် ဆရာကြီး ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း နဲ့ စနစ် ရဲ့ သဘောထား မတူညီမှု ကွာခြားချက်ဟာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့ပြီလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ စနစ်က ပြောင်းသွာတာမဟုတ်ဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သဘောထားကသာ စနစ်အပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ဝမ်းနည်းဖွယ် ပြောင်းလဲသွားတာ ဖြစ်တယ်။ စနစ်ရဲ့ သဘောထား က လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးလာမှုကို လက်ရှိ မျက်မှောက်ခေတ် "ပြောမယုံနိုင်၊ တကယ် မျက်မြင် ကြုံဖူးမှ သိ" အဖြစ်အပျက်ဆိုးတွေက အထင်အရှား ပြသနေပါပြီ။
ဘာသာ၊ လူမျိုး ကွဲ ဖြစ်တဲ့ အွန်လိုင်း မိတ်ဆွေ တယောက်ကလည်း သိပ်မကြာခင်က စာရေးပြီး အခုလို ရင်ဖွင့်ဖူးတယ်။ "အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံတွေမှာ အနစ်နာခံ၊ ဘဝပျက်ခံ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူ့ဖခင်ဟာ သူ့ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက တိုင်းပြည်အပေါ် ချစ်မြတ်နိုး၊ သစ္စာရှိဖို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့တယ်။ သွန်သင်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း သူဟာ တတ်တဲ့ ပညာနဲ့ အစိုးရအမှုထမ်းရင်း သစ္စာရှိရှိ တိုင်းပြည်ကို အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ် စနစ်အရ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး မရဘဲ ခွဲခြားခံနေရမှုတွေ အပြင် အခု လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ရှင်သန်လာနေတဲ့ အမုန်းတရားတွေ၊ သဘောထားတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်သစ် နဲ့ ရှေ့ရေး အတွက် စိုးရိမ်နေရပါပြီ.." ဆိုပြီး စာလှမ်းရေးတော့ စာရေးသူ အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် တော်တော် တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။
စာရေးသူမှာ ဘာသာ/လူမျိုး ခွဲခြားမှုတွေ မြင့်မားတဲ့ မလေး နဲ့ အင်ဒိုက လူနည်းစု အုပ်စုဝင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက် "ကျွန်တော်တို့ကို တိုင်းပြည်က ချစ်သလောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း တိုင်းပြည်အပေါ် ပြန်ချစ်ပါတယ်.." ဆိုတဲ့ နာနာကြည်းကြည်း ဖွင့်ဟ စကားတွေကိုလည်း ကြားဖူးခဲ့တယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီလို အခြေအနေမျိုး၊ အနေအထားမျိုး၊ ခံစားချက်မျိုးကို စာရေးသူချစ်တဲ့၊ မွေးတဲ့ တိုင်းပြည်က လူနည်းစု ဘာသာ/လူမျိုး ကွဲတွေကြား မခံစားစေချင်၊ မခံယူစေချင်ဘူး။ အဲ့ဒီလို အခြေအနမျိုးဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက်လည်း မကောင်းဘူး။ ဆိုတော့ လက်ရှိ မြင်တွေ့၊ ကြားသိ နေရတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ စာရေးသူအတွက် တော်တော် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ် အခြေအနေ ဖြစ်နေတယ်။
● "ဓာတ်ပြားဟောင်းတချပ်" အပြန်အလှန် ဖွင့်ရုံမျှနဲ့ မလုံလောက်တော့
ဆိုခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို "ဘင်္ဂါလီတွေက ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ တိုင်းပြည်ကို ကျူးကျော်လို့သာ ဆန့်ကျင်တာပါ..၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အမုန်းတွေ၊ အစွဲတွေ မရှိပါဘူး.." ဆိုတဲ့ မနှစ်၊ တနှစ်က စပြီး အကြောင်းပြလာခဲ့တဲ့ စကားတွေနဲ့ "ထမင်းရေပူ လျှာလွှဲ" ပြောနေလို့ မရတော့ပါဘူး။ လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး ခွဲခြားမှု နဲ့ အမုန်းတွေ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ စွဲကပ်နေပြီဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။ ဒါမှသာ "အနာသိရင် ဆေးရှိ" ဆိုသလို ရောဂါကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
ဒါ့အပြင် အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ စနစ်ရဲ့ အမွေဆိုးကနေ တဆင့် အမြစ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ ရောဂါဆိုးကို ရှုမြင်သုံးသပ်ရမှာ "အာဏာရှင် အမွေဆိုး" ပါ၊ "အာဏာရှင် နဲ့ စစ်အုပ်စု နောက်မြီးဆွဲတွေက နိုင်ငံရေးအရ ဖန်တီးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်၊ ထောင်ခြောက်တွေမှာ ဘာသာ၊ လူမျိုး ကွဲတွေက ဓားစာခံ ဖြစ်ရတာပါ" ဆိုပြီး သမားရိုးကျ သုံးသပ်ဆင်ခြင်ရုံမျှနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအရ၊ စီးပွားရေး အရ အကျပ်အတည်းဖြစ်၊ ရုတ်ရုတ်ရက်ရက် ဖြစ်၊ အခြေအနေ တင်းမာလာရင် လူနည်းစု ဘာသာ/လူမျိုးကွဲတွေဘက် မြားဦးလှည့် (ဓားဦးလှည့်) တဲ့ "ဓာတ်ပြားဟောင်းတချပ်" ကို စစ်အုပ်စု က မရိုးနိုင် ပြန်ဖွင့်လေ့ရှိသလို တဖန် "စစ်အုပ်စု ရဲ့ လှည့်ကွက်ပါ" လို့ အပ်ကြောင်းထပ် အကြောင်းပြချက်ပေး "ဓာတ်ပြားဟောင်း" ပြန်ဖွင့် သုံးသပ်ရုံနဲ့ မရတော့၊ ပြဿနာကို အပြီးတိုင် မဖြေရှင်းနိုင်တော့ပါဘူး။
အာဏာရှင် ဒေါက်တိုင် နဲ့ စစ်အုပ်စု အသိုင်းအဝန်း၊ အစိုးရ အဝန်းအဝိုင်း တွေရဲ့ ပရောဂ ပါတယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။ (မှတ်ချက် - စာရေးသူ ရဲ့ မနှစ်က ရခိုင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ် သုံးသပ်မှုကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။) ဒါပေမယ့် ဒီအချက် တချက်တည်းကိုပဲ ဇောင်းပေး သုံးသပ်လို့ အဖြေမှန် ရှာမတွ့နိုင်၊ ရေရှည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်း ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှု ပြန်လည် မတည်ဆောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ စစ်အုပ်စု နဲ့ "ပြဒါးတလမ်း၊ သံတလမ်း" လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ အတိုက်အခံလို့ဆိုကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အစုအဖွဲ့ နဲ့ ပညာတတ် အသိုင်းအဝန်းလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ခံယူထားကြတဲ့ အတန်းပညာအောင်၊ ဘွဲ့ရ လူတန်းစား အမျိုးအစားတွေမှာပါ လူမျိုး/ဘာသာစွဲ မုန်းတီးမှုတွေ၊ ပြင်းထန်းတဲ့ သဘောထားတွေ များပြားလာတယ်ဆိုတာ လက်ရှိ ပကတိ အခြေအနေတွေက အထင်အရှား ပြသနေတယ်။
● လူတဦးချင်း သဘောထား မဟုတ်တော့
ခု လတ်တလော ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ လူတဦးချင်း ကိစ္စ ကနေ စတင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အုပ်စု သဘော ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး အုပ်စုဖွဲ့ အကြမ်းဖက်မှု၊ သတ်ဖြစ်မှု၊ မီးရှို့မှု၊ လုယက်မှုတွေ ကျူးလွန် ဖြစ်ပွားလာရာမှာ ပါဝင်သူအားလုံးကို နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်သူ၊ စစ်အုပ်စု လိုလားသူ၊ ပရောဂဖန်တီးလိုသူတွေလို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ သူသူ၊ ကိုယ်ကိုယ် နဲ့ ယေဘုယျ သဘော ကိုင့်ကျင့်တရား နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ လူသာမန်တွေဟာ အတွေးအခေါ် မှောက်မှားလာရင်၊ အထူးအဖြင့် အုပ်စုလိုက် ရမ်းကားနိုင်မှု အခွင့်အရေးလည်း ရလာရင် အကြီးမားဆုံးသော ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ၊ လူသားမဆန်ဆုံးသော ပြစ်မှုကြီးတွေကို ကျူးလွန်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းက အရုပ်ဆိုး၊ အကျည်းတန် လှတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေက သက်သေ ရှိတယ်။ ပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုလည်း တဦးချင်း အကျင့်၊ စာရိတ္တ နဲ့ သီလ ပျက်ယွင်းမှု၊ ပုဂ္ဂလိက အတွေးအခေါ် မှောက်မှားမူကြောင့်လို့ သုံးသပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ သဘောထား၊ အတွေးအခေါ် နဲ့ စရိုက်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု အကျိုးဆက် အုပ်စုသဘောထား "collective attitude" လို့ ယူဆရပါတော့မယ်။
● "အမုန်းတရား" သာ သင်ကြားခြင်း ခံနေရတယ်
မျက်မှောက်ခေတ် ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေ၊ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတွေ၊ စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ စာနယ်ဇင်း လူထု အပန်းဖြေ နဲ့ ပညာပေး မီဒီယာတွေ နဲ့ နောက်ဆုံး.. ဓမ္မတရားကိုသာ ဖြန့်ဖြူးရမယ့် ဘာသာတရားဆိုင်ရာ တရားပွဲတွေမှာပါ "အမုန်းတရား" ဟာ နေရာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယူလာနေတယ်။
Nelson Mandela (1918- ), South-African anti-apartheid activist, revolutionary & politician.
လူသားတဦးဟာ မွေးခါစမှာ အခြားလူသားတဦးအပေါ် ဘာအကြောင်းရယ်ကြောင့်မှ မုန်းတီးမှု မဖြစ်ပေါ်နိုင်၊ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကြီးပြင်းလာစဉ်တလျှောက်မှာ ပတ်ဝန်ကျင် နဲ့ စနစ် အဖွဲ့အစည်းက လူသားရဲ့ အတွေးအခေါ် နဲ့ သဘောထား အမြင်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုံသွင်းလာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ "အမုန်းတရား" ဟာ ပြုစု၊ ပျိုးထောင်၊ မွေးမြူခြင်းခံရတယ်။ သင်ကြားပေးခြင်း ခံရတယ်။ ဒီလို အခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့က "အမုန်းတရား" ကို လူတွေ သင်ယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရနေတာထက်ပိုပြီး "ချစ်ခြင်းတရား" ကို သင်ယူခွင့်ရဖို့ အခြေအနေမျိုး ဖန်တီး၊ အရာရာမှာ "ချစ်ခြင်းတရား" ကို ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးဖို့ လိုတယ်။
● ဘာသာအဆုံးအမနဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ "တရား" တခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်
ဗုဒ္ဓရဲ့တရားမြတ်ကို ထောင်စုနှစ်ချီ နာကြားခွင့် ရခဲ့လို့ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ စင်ကြယ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ သီလ နဲ့ အတွေးအခေါ်၊ သဘောထား မှန်ကန်မှုဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ ဆယ်စုလေးငါးခု စာ မှိုင်းတိုက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ မျက်မြင်ပဲ ဖြစ်တယ်။ လူသား ရဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ အတွေးအခေါ်၊ သီလ နဲ့ တရားဖြောင့်မှတ် မှန်ကန်မှု ဓမ္မ တရားကို ဘာသာတရား အဆုံးအမထက်ပိုပြီး ဘယ်လိုအရာက ကောင်းအောင် လမ်းညွှန်ဆုံးမ ပဲ့ပြင် နိုင်မလဲ လို့ မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာ ရှိတယ်။ ဘာသာတရား ရဲ့ အဆုံးအမ စစ်စစ် လက်ကိုင်ပြုပြီး ဘယ်လို ဘေး၊ ပရောဂ အနှောင့်အယှက်၊ ဝါဒဖြန့်၊ မှိုင်းတိုက်မှုမျိုးကိုမှ မမှုဘဲ မှန်ကန်တဲ့ အယူဝါဒ၊ အမြင်၊ သဘောထား၊ ခံယူချက် နဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ သီလ ဆောက်တည်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဘာသာတရားကို ခုတုံးလုပ်ပြီး "အမုန်းတရား" ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့၊ နွေရာသီ ကလေးသူငယ်များ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ သင်တန်းမျိုးတွေမှာတောင် ဘာသာကွဲ၊ လူမျိုးခြားကို အမုန်းပွားအောင် သင်ပေးနေတဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ မျိုးမှာ လူ့ကျင့်ဝတ် နဲ့ တရားကို ဘာသာ အဆုံးအမ နဲ့ ကင်းလွတ်ရာ ဘာသာ/လူမျိုးမခွဲ လူသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင် အကျုံးဝင်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှန်တရား သဘောထား၊ လူသားပီသမှု၊ လူသားကျင့်ဝတ်၊ လူသားတရား သက်သက် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုသဘော နဲ့ အဆုံးအမ မပါ တည်ဆောက်နိုင်မှ အကျိုးရှိ၊ အလုပ်ဖြစ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ ရပါမယ်။
ဒါကြောင့် လူသားအချင်းချင်း အသားအရောင်၊ ဘာသာ ကိုးကွယ်မှု၊ ဇာတိ နောက်ခံ၊ အမျိုးအနွယ်၊ အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ် မရွေး တပြေးညီ မြင်နိုင်၊ ရှုနိုင်၊ ဆက်ဆံနိုင်၊ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ထားနိုင်စွမ်းတဲ့ လူသားဝါဒတရား ထွန်းကားဖို့ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မဖြစ်မနေ ကြိုးစား ဖော်ဆောင်ရပါမယ်။
● စာပေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
နှစ်ဆယ်ရာစု တရုတ်ခေတ်သစ် စာပေမှာ အရေးပါတဲ့ စာရေးဆရာကြီး လူရွှန်း (၁၈၈၁-၁၉၃၆) ဟာ ဂျပန်မှာ အနောက်တိုင်းဆေးပညာ သင်ယူနေရာကနေ ရပ်နားပြီး စာရေးဆရာဘဝပဲ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကလေးတခုက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ ရုရှား-ဂျပန်စစ် (Russo-Japanese War, 1904-1905) အတွင်းက မှတ်တမ်း ရုပ်ပုံတခုမှာ ရုရှားအတွက် သူလျှို လုပ်ပေးတယ်လို့ စွပ်စွဲ ခံရတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတဦးကို ဂျပန်က ခေါင်းဖြတ်သတ်နေချိန် ခံစားမှုကင်းမဲ့တဲ့ မျက်နှာပေး၊ အပြုအမူ၊ အမူအရာတွေနဲ့ ဘေးက ဝိုင်းရပ်၊ ကြည့်ရှု အားပေးနေတဲ့ မျိုးနွယ်တူ တရုတ်လူမျိုး တွေကို လူရွှန်း မြင်တွေ့ရတော့ တော်တော် တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ ပုံပါ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သူအားလုံးဟာ ကိုယ်ခန္ဓ္ဓာ ချွတ်ယွင်း၊ အားနည်းမှု လုံးဝ မရှိဘဲ ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာအရ ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပျိုရွယ်၊ ကျန်းမာ သန်စွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို လူရွှန်း တွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ အကြီးအကျယ် ဖောက်ပြန် မှားယွင်း၊ အားနည်း ဆုတ်ယုတ်နေတယ်ဆိုတာကို လူရွှန်း နားလည် သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် လူရွှန်းဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသာ ဆေးကုပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်အတတ်ပညာကို ဆက်လက် သင်ယူဖို့ စိတ်မပါတော့ဘဲ လူတွေရဲ့ (မိမိ လူမျိုးတွေရဲ့) အကျင့်၊ စာရိတ္တ၊ ကျင့်ဝတ် နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးနေမှုကို ကုသနိုင်စွမ်းတဲ့ စာပေရေးသားခြင်း အလုပ်ကိုသာ ဇောက်ချလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
"England is sick, and … English literature must save it. The Churches (as I understand) having failed, and social remedies being slow, English literature has nowatriple function: still, I suppose, to delight and instruct us, but also, and above all, to save our souls and heal the State.
George Stuart Gordon (1881–1942), British literary scholar.
ဗြိတိသျှ စာပေပညာရှင် "G. S. Gordon" က စိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျားနာနေတဲ့ အင်္ဂလန်ပြည် နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် ဘာသာတရား နဲ့ လူမှု ကုထုံးတွေက သိပ်အလုပ်မဖြစ်ဘဲ အင်္ဂလိပ် အနုသုခမ ရသ စာပေ ကသာ ကယ်တင်ဖို့ လိုကြောင်းကို အခုလို ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ "အင်္ဂလိပ်စာပေဟာ တာဝန်ဝတ္တရားကြီး သုံးသွယ် ကို ထမ်းဆောင်ရပါမယ်..။ လူတွေကို ရသခံစား ပျော်ရွှင်မှု ပေးနိုင်ရမယ်..။ ဆုံးမပဲ့ပြင် လမ်းညွှန် နိုင်ရမယ်။ အရေးကြီးဆုံး အနေနဲ့ကတော့ လူတွေရဲ့ ဝိညာဉ် ကို ကယ်တင်ပြီး ဖျားနာနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကုစားရပါမယ်" လို့ စာပေ ရဲ့ တိုင်းပြည်၊ လူမျိုး နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အပေါ် အကျိုးသက်ရောက် လွှမ်းမိုးနိုင်မှု သဘောကို ချပြခဲ့ဖူးတယ်။
အလားတူပဲ လက်ရှိ ဘာသာ/လူမျိုးစွဲ အခြေခံ အမုန်းတရားတွေ နဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဗမာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက်လည်း လူတွေရဲ့ အစွန်းရောက် ပယောဂပူးကပ်၊ အတွေးအခေါ် မှောက်မှား နေတဲ့ ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ပြီး စိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူသား ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျားနာနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဆေးကုသဖို့ရာ အတွက် တော်တည့်၊ မှန်ကန်တဲ့ စာကောင်း၊ ပေကောင်း တွေ အများအပြား ပေါ်ထွန်း၊ လူထုကြား ရောက်ဖို့လိုတယ်။
ဘာသာတရား လွှမ်းမိုးမှုကင်းတဲ့ (သို့) အစွဲလုံးလုံးမပါတဲ့ ဘာသာတရား ရဲ့ တရားဓမ္မ အစစ်ကိုသာ ဖော်ထုတ်၊ ညွှန်းဆို၊ သင်ကြားပြီး ဘာသာ/လူမျိုးကွဲခြင်း အပေါ် အခြေခံပြီး မုန်းတီးမှု အဆိပ်အတောက်ကို မဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ကျင့်ဝတ်ရှိ၊ အတွေးအခေါ်မြင့်မား၊ အမြင်ကျယ်ပြန့်၊ နှလုံးရည်ပြည့်ဝ တဲ့ တရားစစ်တွေ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြန့်နှံ့ဖို့အတွက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သိက္ခာ ပြည့်ဝတဲ့ ထေကြီးဝါကြီး ရဟန်းသံဃာ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆုံးမသြဝါဒ လမ်းညွှန်မှုတွေ ရှိဖို့လိုသလို စာပေသြဇာရှိတဲ့ စာရေးဆရာကြီးတွေကလည်း စာပေကောင်းတွေ မှတဆင့် လူထုကို ဦးဆောင်၊ လမ်းညွှန် ပြသနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ သုတ၊ ရသ စာရေးဆရာကြီးတွေ အနေနဲ့ အခုကစပြီး တိုင်းပြည်မှာ လူသားအားလုံး တန်းတူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ထားနိုင်တဲ့ လူသားဝါဒ ထွန်းကားစေဖို့၊ လူများစု နဲ့ လူနည်းစု အုပ်စုဝင်တွေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သာတူညီမျှ တန်းတူ နေနိုင်စေဖို့၊ လူမျိုး/ဘာသာစွဲ စိတ်တွေ လျော့နည်းဖေို့၊ လူမျိုး/ဘာသာခြားတွေကို ဖိနှိပ်မှု၊ ခွဲခြားမှု သဘောထားတွေ မဖြစ်ပေါ်စေဖို့ နဲ့ အမုန်းတရား၊ ရန်ငြိုးတွေ ပြေပျောက်စေဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ စာပေထဲမှာ အကျိုး/အကြောင်းပြ ထည့်သွင်း ရေးသားဖို့ မရှိမဖြစ် နဲ့ အများအပြား လိုအပ်နေပါပြီ။
● ဗဟုဝါဒသာ လူ့လောကအတွက် သုခချမ်းသာ
လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ အယူဝါဒ ပေါင်းစုံ၊ အတွေးအခေါ်ပေါင်းစုံ စည်ပင်၊ ရှင်သန်၊ ဘာသာတရား ပြင်းထန် အစွန်းရောက်မှု မရှိဘဲ ဘာသာတရားက တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးမှာ လွှမ်းမိုးမှု ကင်းတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုးတွေသာ ကမ္ဘာမှာ ဖွံ့ဖြိုး၊ တိုးတက်၊ တည်ငြိမ်၊ အေးချမ်း တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး လောက နိဗ္ဗာန် တည်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ မျက်မှောက် ကမ္ဘာက သက်သက်ပြုပြီး ဖြစ်တယ်။ ဒီလို ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ၊ အတုယူစရာတွေ၊ လေ့လာစရာတွေ မျက်စိ ရှေ့မှောက် အသင့်ရှိနေပါလျက်နဲ့ ဗဟုဝါဒကို အားပေးတဲ့၊ လူများစု၊ လူနည်းစု ဘာသာ/လူမျိုးမခွဲ၊ မကွဲ အပေးအယူမျှ၊ သင့်တင့်၊ တန်းတူ နေထိုင်နိုင်စွမ်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည် ဗမာပြည်ကို လိုချင်သလား၊ ဘာသာတရားကသာ အစစ အရာရာ ဖြစ်နေတဲ့ သီအိုကရေစီ တိုင်းပြည် ဗမာပြည်ကို လိုချင်သလား "Democarcy Vs Theocracy" ဆိုတာမျိုး ယှဉ်ချ၊ မေးခွန်းထုတ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေစရာကို အကြောင်းမရှိပါ။
ဗဟုဝါဒအားပေး ဒီမိုကရေစီသာ တိုင်းပြည်အတွက် အဖြေ ဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ဖြစ်တယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်း၊ နိုင်ငံကြီးသား ပီသတဲ့ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ "ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း" ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်း ဒီ ဗဟုဝါဒ နဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ အရေးကြီးတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ဘက်စုံ ပြည့်စုံ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ လောကနိဗ္ဗာန် တည်ထောင်နိုင်မှုအတွက်လည်း ဒါဟာ သော့ချက် ဖြစ်တယ်။
ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်း ပျောက်ကွယ်၊ အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်း ခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ မြင်သာထင်သာတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာ အောင်တန်းနောက်တန်းကျ "ဓားမနောက်ပိတ်ခွေး" ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေအပြင် မမြင်သာပေမယ့် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ စိတ္တခွန်အား အာဟာရ ကောင်းမြတ်ခြင်း တရား၊ လူ့တန်ဖိုး၊ လူ့ကျင့်ဝတ်၊ လူသားစံနှုန်း သဘောထားတွေ "အစစ အရာရာ တစစီ ပြိုလဲပျက်စီး ယုတ်လျော့နေခြင်း" ကို တိုင်းပြည်မှာ ရပ်တန့်စေဖို့ရာအတွက် တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတတ်သူ အားလုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကျိုး/အကြောင်းညီ ဆင်ခြင်သုံးသပ်၊ အမှန်မြင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ဆုတောင်းပါတယ်။
လူမျိုး/ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ လျော့နည်း၊ ပပျောက်စေဖို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဆင်ခြင်စရာ၊ ဖော်ဆောင်စရာ အကြောင်းအရာများစွာ ကျန်ပါသေးတယ်။ အချိန်ပေးနိုင်ရင် ဆက်လက် ဆွေးနွေးတင်ပြပါဦးမယ်။
နောက်ဆက်တွဲ။ ။ စာရေးသူ ယခင် ဆွေးနွေးတင်ပြဖူးခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အပေါ် ထိခိုက်စေမှု သဘော၊ လူမျိုး/ဘာသာရေး အမုန်းတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ လျော့နည်းစေဖို့ နဲ့ လူမျိုး/ဘာသာ ကွဲ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့၊ ထုံးတမ်း မတူညီတဲ့ အုပ်စုတွေ အချင်းချင်း ဘယ်လို သင့်မြတ်၊ ငြိမ်းချမ်းအောင် နေထိုင်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ သဘော ဆက်စပ်တဲ့ အောက်ပါ ဆောင်းပါးများကိုလည်း တပါတည်း ပြန်လည် ဖတ်ရှု ဆင်ခြင် သုံးသပ်ကြပါ။
၁။ "ဖက်ထိပ်များ နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း" - http://moemaka.com/?p=23353
၂။ "အမုန်းကြီးသူ သို့" - moemaka.com/?p=23887
၃။ "ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆင်ခြင်စရာ" - http://moemaka.com/?p=24166
၄။ စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ကမ္ဘာ့ဘာသာ အယူဝါဒများ - http://moemaka.com/?p=24501
၅။ "မျိုးမြင့်စိတ်နေဝါဒ" - http://www.scribd.com/doc/132412755/Ethnocentrism-by-Nyein-Chan-Aye-Khit-Maung-Vol-1-No-2-27-Jun-2012
၆။ "ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ" - http://www.scribd.com/doc/103307201/Rohingya-Crisis-by-Nyein-Chan-Aye-18-Aug-2012-Updated-with-comments-reply
၇။ "အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာများ" -http://www.scribd.com/doc/104681870/Characteristics-of-Dictatorship-by-Nyein-Chan-Aye-Khit-Maung-Vol-1-No-4-27-Aug-2012
၈။ "အိုဘားမားခရီးစဉ်မှ ဆင်ခြင်စရာများ" - http://moemaka.com/?p=29392
Posted by Aung Htet at 8:57 AM0comments
Zay Hime - Poem
ဆင်းရဲလို့ စာ ၀ယ်မဖတ်နိုင်တာ
ခလေးတွေ ငိုမြည်သံ အော်ဟစ်သံတွေနဲ့
သူ့ ခလေးကို ပြောနေရှာတယ်
ဒို့ မှာ လယ်မရှိ
ဒို့ မှာ စပါးမရှိ
ဒို့ မှာ ၀မ်းစာမရှိ
Posted by Aung Htet at 8:05 AM0comments
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းနှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း များအား ဆထပ်တန်ဘိုး တွင်ကျယ်စွာဖြင့် အများပြည်သူတို့အား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်အတွက် ၂၄.၃.၂ဝ၁၃ နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်တွင် အရေးပေါ်လူနာတင် ယာဉ်တစ်စီးအား ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ (အ.လ.ပြ)၊ အ.မ.က(၁၉) တာမွေ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စန်းရီ၊ ဦးသိန်းသန်း + ဒေါ်ခင်စန်းစန်း (မိသားစု) တို့မှ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အခမ်းအနားအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခခန်းမဆောင်ကြီး တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အလှူရှင် ဦးသိန်းသန်းမှ လှူဒါန်းရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာအား ပြန်လည်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ကာ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားပြီး အခမ်း အနားအား အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် အရေးပေါ်လူနာများဖြစ်ကြသည့် နာတာရှည်ဝေဒနာသည်များ (သို့) ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ရန်ခက်ခဲသော ဝေဒနာသည်များ တို့အား နေအိမ်မှ သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများသို့၎င်း၊ ဆေးရုံများမှ နေအိမ်များသို့၎င်း၊ မီးဘေးသင့်နေရာများ သို့၎င်း ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း (အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်း)သင်တန်းများ သင်ယူလေ့ကျင့်ထား သော အသင်းသား/သူများတို့မှ လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် "သက်ရှိ" ကြက်ခြေနီစွမ်းအား၊ "သက်မဲ့" လူနာတင်ယာဉ်တို့ ပူးပေါင်း၍ အမွန်မြတ်ဆုံး အထိရောက်ဆုံး အများပြည်သူတို့အား ကူညီပေးဆပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခု ကဲ့သို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အရေးပေါ်လူနာ တင်ယာဉ် လှူဒါန်းခဲ့ကြသော အလှူရှင်များတို့အား လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။
Posted by Aung Htet at 7:35 AM0comments
Google goes MM
Google ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို မြန်မာဒိုမိန်းဖြင့် အသုံးပြုလာနိုင်ပြီး Google Play လည်း စတင်အသုံးပြုနိုင်
မိုးမခသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ ၀ိကလီးအီလဗင်း၊ မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၃
Google ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ www.google.com.mm ဟူသော မြန်မာဒိုမိန်းဖြင့် စတင်အသုံးပြုလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် Android ဆော့ဝဲလ်နှင့် ဂိမ်းများကို Download ဆွဲရယူနိုင်မည့် Google Play ကိုလည်း မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်အသုံးပြုလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က Google Play ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် Proxy ကျော်ရခြင်းများရှိပြီး Android Apps များ စုစည်းပေးထားသော ကြားခံဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု၍လည်း Download ဆွဲကြရကြောင်း သိရသည်။ Google Play ကို အသုံးပြုလာနိုင်ခြင်းကြောင့် Android အသုံးပြုသူများ၊ Developer များအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်ကြသည်ဟု ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Maung Yit at 10:40 PM0comments
Aung DIn - Hluttaw in Perspective (14)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၃၈၊ မတ်လ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၁၄)
အောင်ဒင်၊ မတ် ၂၆။ ၂၀၁၃
အပိုင်း (၁၄) ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (င)
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှင့် စောင့်ထိန်းသင့်သော ကိုယ်ကျင့်တရား
(၃) ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (Financial Disclosure)
အမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ လိုက်နာရတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေထဲမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ဝင်ငွေတွေကို နှစ်စဉ်ကြေညာရတာလဲ အရေးကြီးတဲ့ ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မေလ (၁၅) ရက်ကို နောက်ဆုံးထားပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ခန့်အပ်ထားတဲ့ အကြီးတန်းလက်ထောက်များ၊ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြီးတန်းအရာရှိများဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်တာကလအတွင်း သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝင်ငွေ နဲ့ အခွန်ပေးဆောင်မှုတွေကို လွှတ်တော်ကျင့်ဝတ်ကော်မီတီကို မပျက်မကွက်တင်သွင်းရပါတယ်၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အချိန်မီ မတင်သွင်းနိုင်လို့ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်က စာရေးပြီး မေတ္တာရပ်ခံရင် ကော်မီတီက ရက်အနည်းငယ် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်၊
ဒီနေရာမှာ အကြီးတန်းအရာရှိများဆိုတာက နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းအထက်ရသူတွေကို ဆိုလိုတာပါ၊ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းအောက်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေတင်စရာမလိုပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မည်ဆိုရင် လွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ကို အကြီးတန်းအရာရှိများလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်၊
မေလ ၁၅ ရက်ကို နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရတာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ နိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့ ဝင်ငွေခွန်ကို ဧပြီလ ၁၅ရက်နောက်ဆုံးထားပေးဆောင်ရတာမို့ အခွန်ဆောင်ပြီး တစ်လအကြာရက်ကို သတ်မှတ်ထားတာပါ၊ သူတို့မလွဲမသွေကြေညာရတဲ့ ဝင်ငွေစာရင်းမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခံစားရရှိတဲ့ လစာငွေတင် မကပါ၊ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်ကရတဲ့ ဝင်ငွေ (ဥပမာ အိမ်တွေ၊ ခြံတွေပိုင်ပြီး အဲဒီ အိမ်၊ ခြံတွေကို အငှါးချထားတယ်ဆိုရင် ရတဲ့ ဝင်ငွေ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေရှိရင် အဲဒီလုပ်ငန်းရဲ့ တန်ဘိုးနဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းကဝင်ငွေ)၊ ကိုယ်ကချေးငှါးထားတာရှိရင် ရရန်ရှိငွေ၊ မိမိပိုင် အိမ်၊ ခြံ၊ လုပ်ငန်းတွေကို ရောင်းချခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီရောင်းချမှုကရတဲ့ အမြတ်အစွန်း၊ ပြင်ပကုမ္ပဏီတွေမှာ အစုရှယ်ယာ ဝင်ထားတယ်၊ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အစုရှယ်ယာနဲ့ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုရဲ့ တန်ဘိုးနဲ့ တစ်နှစ်အတွင်းတိုးပွါးလာမှု၊ တန်ဘိုးကြီးမားတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ ခရီးသွားတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်တွေ၊ လွှတ်တော်ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရာထူးတာဝန်တွေနဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ၊ အားလုံးကို တင်ပြရတာပါ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အကြီးတန်းအရာရှိတွေတင် မကပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်တွေ၊ သူတို့နဲ့ အတူနေဆဲ သား၊ သမီးတွေရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အချက်အလက်များ အားလုံးကို တင်ပြရတာပါ၊
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်အမီ မတင်ပြနိုင်ရင် ကော်မီတီက ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၀၀ နောက်ကျကြေးတပ်ပါတယ်၊ မှားယွင်းတင်ပြမှု၊ မပြည့်စုံတဲ့ တင်ပြမှုတွေကို ကော်မီတီက စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင် အခြားအရေးယူမှုများကိုလဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အမှားအယွင်းတွေ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင် ကော်မီတီက တရားရေးဋ္ဌာနကို ရာဇဝတ်မှုနဲ့ အရေးယူဖို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်၊
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာမို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ပီသအောင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါတယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဝင်ငွေ နဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အများသိအောင် ထုတ်ပြန်ကြေညာတာပါ၊
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေဟာ ဖွင့်ထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမှာပါ၊ အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အများကြီးရှိပါတယ်၊ ချမ်းသာတာ အပြစ်မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမည့် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြွယ်ဝမှုတွေ၊ မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ တရားနည်းလမ်းကျ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်၊ အများပြည်သူရဲ့ မျက်ရည်တွေကို နင်းချေပြီးမှ ချမ်းသာကြွယ်ဝတာမဖြစ်သင့်ပါ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေရဲ့ ဘဝတွေကို ဖျက်ဆီးပြီးမှ ကြွယ်ဝချမ်းသာတာ မဖြစ်သင့်ပါ၊ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလဲ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်သင့်ပါ၊
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရတဲ့ ဝင်ငွေကသိပ်မများလှပေမည့် နန်းတော်လို စံအိမ်ကြီးတွေမှာ ဇိမ်ခံကားတွေကို အလဲလဲအလှယ်လှယ် စီးနိုင်သူတွေ၊ အခြွေအရံတွေ အများကြီးခန့်ထားနိုင်သူတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်လေယဉ်တောင် စီးနိုင်သူတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ သိန်းပေါင်း ရာပေါင်းများစွာ လှူဒါန်းနိုင်သူတွေကို သူတို့ ဒီကြွယ်ဝမှုတွေ ဘယ်လိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်၊
(၄) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (Campaign Activities)
(က) လွှတ်တော်အမတ်ဟာ သူရဲ့ ရာထူးတာဝန်အရ လွှတ်တော်က ပေးအပ်ထားတဲ့ ရုံးခန်းတွေ၊ အဆောက်အအုံတွေကို သုံးပြီး မဲဆွယ်ခွင့်မရှိပါ၊
(ခ) လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့ ရုံးဋ္ဌာနက ရုံးသုံးပစ္စည်းကြိယာတွေ (လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့ အမည်နဲ့ရုံးသုံးစာရေးစက္ကူကစလို့ ကွန်ပြူတာတွေ၊ ပုံနှိပ်စက်တွေ၊ ဖိုင်တွေ၊ တယ်လီဖုန်းစတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကြိယာတွေ စသဖြင့်) ကို ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရာမှာ လုံးဝသုံးခွင့်မရှိပါ၊
(ဂ) လွှတ်တော်အမတ်က ခန့်အပ်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် မဲဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေမှာ ဆောင်ရွက်ပါတယ်၊ ရုံးချိန်အတွင်းမှာ လုပ်ခွင့်မရှိပါ၊ ဒါပေမည့် ဘယ်သူမှ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒမပါပဲ မဲဆွယ်ဖို့ ဖိအားပေးခိုင်းစေလို့မရပါ၊
(ဃ) လွှတ်တော်အဆောက်အအုံကြီးများအတွင်းမှာ ဘယ်လွှတ်တော်အမတ်မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အလှူငွေတွေတောင်းခံခြင်း၊ လက်ခံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရပါ၊
(င) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေတွေကို ရွေးကောက်ပွဲ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးကိစ္စများမှာပဲ သုံးခွင့်ရှိပါတယ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် သုံးစွဲခွင့်မရှိပါ၊ နောက်ကျပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီး ချေးငှါးခွင့်မရှိပါ၊
(စ) လွှတ်တော်အမတ်က သူ့ရဲ့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့ ဝန်ထမ်းများဟာ သူတို့ကို အလုပ်ခန့်ထားတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေ ထည့်ခွင့်မရှိပါ၊
(၅) အကျိုးစီးပွါးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခဖြစ်မှု (Conflict of Interest)
(က) မိမိရဲ့ ရာထူးနဲ့ ရာထူးတာဝန်ကြောင့်သိခွင့်ရတဲ့ အတွင်းသတင်းတွေကို မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျိုးစီးပွါးအတွက် သုံးစွဲခွင့်မရှိပါ၊
(ခ) လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဟာ မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွါးနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ပါဝင်မဲပေးခွင့်မရှိပါ၊
(ဂ) လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဟာ မိမိရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေအတွက် နိုင်ငံတော်ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းထဲကနေ ရန်ပုံငွေတစ်စုံတစ်ရာတောင်းခံမယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်ရော သူ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ပါ ဒီ ရန်ပုံငွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးခံစားမှုမှ ရှိမှာမဟုတ်ကြောင်း ကတိပြုစာကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရေးရာကော်မီတီထံ ပေးပို့တင်ပြဖို့လိုပါတယ်၊
(ဃ) လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဟာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ အိမ်၊ ခြံ၊ အဆောက်အအုံ ငှါးရမ်းတာ၊ ရောင်းချတာ လုပ်ခွင့်မရှိပါ၊
(င) လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်အပါအဝင် မိသားစုဝင်တွေကို သူ့ရဲ့ လွှတ်တော်ရုံးခန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ငှါးရမ်းခွင့်ရှိပါတယ်၊ သို့သော်လဲ မသင့်တော်ကြောင်း အကြံပြုထားပါတယ်၊ တစ်ကယ်လို့ ဆွေမျိုးသားချင်းကို အလုပ်ခန့်တယ်ဆိုရင်လဲ လွှတ်တော်ကျင့်ဝတ်ကော်မီတီကို ဆက်သွယ်ပြီး အကျိုးစီးပွါးပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် ရှောင်နိုင်ဖို့ အကြံဉဏ်တောင်းခံသင့်ပါတယ်၊ ရုံးမှာလဲ ဆွေမျိုးသားချင်းဝန်ထမ်းကို လွှတ်တော်အမတ်ကိုယ်တိုင်ကရော အခြားဝန်ထမ်းများကပါ အထူးအခွင့်အရေးမပေးရပါ၊
(စ) လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေ၊ အကြီးတန်းဝန်ထမ်းတွေဟာ လွှတ်တော်တာဝန်တွေကို စွန့်ခွါပြီး ပြင်ပအလုပ်တစ်ခုကို ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီလို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပြင်ပကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စတင်ညှိနှိုင်းတဲ့ရက်ကစလို့ သုံးရက်အတွင်း ကျင့်ဝတ်ကော်မီတီကို စာနဲ့ မပျက်မကွက် ရေးသားတင်ပြရပါမယ်၊
အသက် ၄၇ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ဂျက်စီဂျက်ဆင် (အငယ်) ဟာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ထင်ရှားလာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ်တစ်ယောက်ပါ၊ ထင်ရှားတဲ့ အမေရိကန်လူမဲခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျက်စီဂျက်ဆင် (အကြီး) ရဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပညာတတ်၊ ထက်မြက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော်ကို အီလီနွိုင်ပြည်နယ်၊ လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ကနေ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရွေးချယ်ခံပြီး ရောက်ရှိခဲ့တာပါ၊ ၁၉၉၇-၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉-၂၀၀၀၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃-၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂၊ စသဖြင့် နှစ်နှစ်သက်တမ်း ၈ ကြိမ်ဆက်တိုက်အရွေးခံရပြီး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့၊ အလားအလာကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသူပါ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲ မှာလဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ နှစ်နှစ်သက်တမ်းအတွက် ထပ်မံအရွေးချယ်ခံရပါတယ်၊
ဒါပေမည့် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီး ၁၆ ရက်အကြာမှာ သူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘဝက နှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်၊ အကြောင်းပြချက်ကတော့ သူ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာရယ်၊ အောက်လွှတ်တော်ကျင့်ဝတ်ကော်မီတီက သူ့ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး မကြာခင်အရေးယူတော့မှာရယ်မို့ပါ၊
အောက်လွှတ်တော် ကျင့်ဝတ်ကော်မီတီက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လဆန်းကစလို့ ဂျက်စီဂျက်ဆင် နဲ့ သူ့ဇနီး စန္ဒီဂျက်ဆင် (Sandi Jackson) တို့ကို ရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေတွေအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာပါ၊ အချက်အလက်တွေ ခိုင်လုံလို့ ကော်မီတီ ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်နဲ့ ပြည်ထောင်စုထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (Federal Bureau of Investigation/FBI) ကလဲ တစ်ချိန်ထဲမှာ စုံစမ်းနေတာပါ၊ ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာတော့ သူတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးက ရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၇သိန်း ၅သောင်းကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံချက်ပေးပါတယ်၊ လွှတ်တော်ကျင့်ဝတ်ကော်မီတီက ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်က နှုတ်ထွက်သွားလို့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအရေးယူမှုကို ရင်မဆိုင်ရပေမည့် ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ ပြည်ထောင်စုထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က တရားစွဲတာကိုတော့ ရှောင်လို့မရပါ၊ လာမည့် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ချီကာဂိုမြို့မှာရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ ခရိုင်တရားရုံးက လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကို ပြစ်ဒါဏ်စီရင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဂျက်စီဂျက်ဆင်အနေနဲ့ ထောင်ဒါဏ် ၄၆လကနေ ၅၅လအထိကျနိုင်ပြီး သူ့ဇနီးကတော့ ထောင်ဒါဏ် တစ်နှစ်ကနေ နှစ်နှစ်အထိကျနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် သူတို့ အလွဲသုံးထားတဲ့ ဒေါ်လာ ခုနှစ်သိန်းငါးသောင်း ကိုလဲ ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့အတွက် ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကို တရားရုံးက သိမ်းမှာပါ၊
Posted by Maung Yit at 10:06 PM0comments
Labels: Aung Din, News Features
Po Htet - Compassion
ကိုယ်ကျင့်တရားက နောက်၊ ကိုယ်ချင်းစာခြင်းက အရင်
ဖိုးထက်၊ မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၃
တစ်မြန်မနေ့က ရင်ဘတ်မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်မှ စာအုပ် တစ်အုပ် လက်ဆောင်ပေးလာသည်။ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ပြောမနာ ဆိုမနာ အပြန်အလှန် စိတ်ကောက်ဘူးကြသူတွေ။ ဒီလူက စိတ်ရှင်း၊ လူရှင်း။ ကိုယ်ကျင့်တရားမှာ၊ စိတ်ချယုံကြည်ရမှုမှာ သံသယရှိစရာ မလိုသောလူ။ ဒီလိုလူနှင့် ကျွန်တော်လို အကုသိုလ်အကောင် အဘယ်ကြောင့် မိတ်ဆွေ သံယောဇဉ်ရှိနေကြသလဲ ဆိုတာတော့ သူ့ ကုသိုလ်ကံ ဆိုးပြီး ကျွန်တော့် ကုသိုလ်ကံ ကောင်းသော ကြောင့်ဟုသာ သတ်မှတ်ချင်သည်။
သူပေးသော စာအုပ်လေးက မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင် ဇနကဘိဝံသ ရေးသားတော်မူသည့် "ကိုယ်ကျင့် အဘိဓမ္မာ" စာအုပ်လေး။ ဒီစာအုပ်လေး ကျွန်တော့်ဆီမှာ အပိုင်ရှိနေတာ သေချာသည်။ အိမ်က စာအုပ်စင်ပေါ်မှာလား။ သို့မဟုတ် စာအုပ် သေတ္တာထဲမှာလား။ ဒီလောက်ေ၀၀ါးနေပုံထောက်လျှင် စာဖတ်သူက ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ခန့်မှန်းမိလောက်ပြီ ထင်ပါသည်။ စာအုပ်ရေးသားပြုစုတော်မူသည့် ဆရာတော်၏ သာသနာတော်အတွက် ၀ီရိယကြီးမားပုံကို စာအုပ်တွေထဲမှာ မကြာခဏ ဖတ်ဘူးသည်။ စာရေးလျှင် မတ်တပ်စားပွဲကြီးနှင့် ရေးသည့် ဆရာတော်ကို အံ့သြရသည်။ ပျံလွန်တော်မူမည့် နေ့မှာ မနက်စာဝါ ပို့ချသွားသည့် ဆရာတော်ကို တွေးမိပြီး ကြက်သီးများ ထမိခဲ့သည်။
အခုလဲ ဆရာတော်၏ အနီရောင်အဖုံးနှင့် ကိုယ်ကျင့် အဘိဓမ္မာ စာအုပ်လေးကို ကျွန်တော် ဖတ်ဘူးခဲ့ တာသေချာသည်။ သို့သော် စဉ်းစားဆင်ချင်ခြင်းမပါသော လူပြိန်း စာဖတ်နည်းဖြင့် ကျွန်တော်ဖတ်မိခဲ့ဟန်တူသည်။ အခု ပြန်ဖတ်တော့ စာကြောင်း၊ စာလုံးတွေက ဖတ်ပြီးသား အဟောင်း။ အတွေးတွေက အသစ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းက စာအုပ်ရှေ့ဆုံးမှာ စာတိုလေး တစ်ကြောင်းရေးပေးသွားသည်။ "တစ်ချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်လိမ့်မယ်" ဟု ရေးပေးခဲ့သည်။ သူပြောသော အချိန်က ဘယ်အချိန်လဲ။ သေမင်း တွင်းဆုံးကျသောအချိန်လား။ လောကဓံတရား၊ အခက်အခဲတွေ စိတ်ခြောက်ခြားလောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်တွေကိုလား။
စာအုပ်ကို စပြီး မဖတ်သေးခင် ကိုယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ပြန်ငှဲ့ကြည့်မိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လက်မထောင်လောက်သော အကြောင်းအရာများတွေ့ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မှန်ပြန်ကြည့်ပြီး ထွီခနဲ့ နေအောင် တံတွေးထွေးပစ်ချင် စိတ်တွေ ပေါက်လာသည်။ တိန်တိန်မြည် ကိုယ်ကျင့်တရား မဟုတ်တာတော့ သေချာသည်။ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ကြက်ဥ တစ်လုံးဟု ဆိုပါစို့။ တစ်ချို့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားက ကြက်ဥ အစိမ်းနှင့် တူသည်။ ထိမိခိုက်မိပြီး အပြင်ကို အကာ အရည်တွေ၊ အနှစ်တွေပါ ထွက်လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို၊ အ၀တ်အစားတွေကို ပေပွကုန်သည်။ လူမြင်မကောင်းအောင် ဖြစ်စေသည်။ ကိုယ်ကျင့် တရား အလွန်ဆိုးသော သူများကြတော့ ကြက်ဥအပုတ် ကျကွဲတာနှင့် တူမည်ဟု ထင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလွန်ပုတ်စော်နံစေသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကျတော့ ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံးနှင့် ပမာပြုရမည်ထင်သည်။ ထိမိ ခိုက်မိလျှင် အပြင်ဘက်သို့ စွန်းထင်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် အရာများ ထွက်ကျမလာသော်လည်း အပြင်အကာများကတော့ ကြေမွကုန်သည်။ အပြင်အခွံမာများ မွမွ ကြေနေသော ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးနှင့် ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့်တရား တူပါလိမ့်မည်။ တစ်စစီ ကြေမွပြီး စုတ်ပြတ်မသွားအောင် ထပ်ပြီး မထိမိ၊ မခိုက်မိအောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားရအုံးမည်။
ဆရာတော့် စာအုပ်လေးက တစ်ထိုင်တည်း ဖတ်ပြစ်သင့်သော စာအုပ်မဟုတ်။ တစ်ပိုဒ်ဖတ်၊ တစ်ခါတွေး။ မကြေနပ်ရင် မရှင်းလျှင် တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်။ မသေမချင်း အထပ် ထပ် အခါခါ ဖတ်ရမည့် စာအုပ်ဟု ထင်သည်။ ထို့ကြောင့် စာအုပ်ကို စဖတ်ခင်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဥာဏ်မှီသလောက် အတွေးနယ်ချဲ့နေမိသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပါတ်သက်လျှင် ဆရာတော်ကြီးကဲ့သို့ အလွန်သိက္ခာ ရှိသော ရဟန်းများကို ကျွန်တော် ထူးပြီး မအံ့သြမိ။ ဘုရားသားတော်တွေ ပီပီ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အဆုံးမ၊ လမ်းပြမှုအောင်မှာ လူ့လောကကြီးကောင်းကျိုး၊ ငြိမ်ချမ်းသာယာဝပြောအောင် နေထိုင် ပြုမူကြသည်။ ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှုတ်သုံးပါးကို သတိကပ်ပြီး မေတ္တာတရားတော်များ ထုံမွှန်းပြီး ဒါမှ ဗုဒ္ဓသားတော်ကွဟု စံပြုလောက်အောင် နေနိုင်သော အရှင်တွေ။ ဒါကြောင့် ထူးထူးခြားခြားကြီး မအံ့သြမိခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် လူတောထဲမှာနေ၊ လူတွေနဲ့ အလုပ် လုပ် သာမန်လူသားတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းဖို့ဆိုတာ အလွန်ရှင်းလင်း ပြတ်သားသော ဥာဏ်ပညာနှင့် အလွန်ခိုင်မာသော ယုံကြည်ချက်တွေ ရှိရမည် ထင်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုပါစို့။ အငြိမ့်မင်းသမီးကို ဗိုလ်ချုပ်သူငယ်ချင်းများက မြှောင့်ပင့်ပေးပြီး စနောက်ခိုင်းသည်ကို ဗိုလ်ချုပ်တုံ့ပြန်ပုံက ပြုံးချင်စရာ။ ကျွန်တော်သာ ဆိုလျှင် ငါ့ကို ချွန်တွန်း လုပ်နေကြပြီဟု တွေးမိနိုင်သေးပေမယ့် နယား ပါးယား စကားတွေ ပြောမိနိုင်တာ သေချာသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်သော ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ၀န်တိုမစ္ဆိရိယ စိတ်တွေများနေပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး မပျက်မခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီး မပျက်မခြင်း တည်တံနေမည့် လူဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဆရာကြီး သော်တာဆွေ၏ "မှန်ကန်ခြင်းနှင့် ရဲရင့်ခြင်း" (ခေါင်းစဉ် အမှတ်မှားနိုင်ပါသည်။) ဆိုသည့် ၀တ္ထုတိုလေးကို သတိတရ ရှိမိသည်။ တစ်သက်လုံး မှန်ကန်တည်ကြည်လာခဲ့သော၊ အလွန်သတ္တိရှိ ရဲရင့်သော ရွာလူကြီး သူကြီးက ဆေးသမား မိန်းမကို လိုချင်တပ်မက်သော စိတ်ဇောကြောင့် မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်သော အပြုအမူများ လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ရပ်လုံး အသိ။ တစ်ရွာလုံး အသိ။ မတရားဘူးဆိုတာ သိကြသော်လည်း ကြောက်စိတ်ကြောင့် စောဒက မတက်ရဲကြ။ သို့သော် ဆေးသမား၏ အမေ အမယ်အိုကြီးက ဓားကြိမ်း လာကြိမ်းသော အခါ အိမ်ထဲက အိမ်အပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရပ်ရွာထဲကလဲ အဖွားကြီးကို ဆွဲမည့် တားမည့်သူ မရှိ။ နောက်တော့ တစ်ရပ်တစ်ပါးသို့ ပြောင်းပြေးရပြီး မထင်မရှား ဘ၀နှင့် ဘ၀သေသွားခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော့်အတွေးကို တစ်ဆင့်မြှင့်ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ သမိုင်းမှာရော။ အဖေကိုသတ်ပြီး ဘုရင်ဖြစ်လာသည့် နရသီဟပတေ့မင်း၊ ကြက်တိုက် ဘုရင် ပုဂံမင်း အလွန်အရုပ်ဆိုးသော သမိုင်းထဲက ဘုရင်တွေ။ ဒီဘုရင်တွေပေါ့ကွာဟု သေသွားသည့်တိုင်အောင် မေးငေါ့ခံနေရဆဲ။ ကျွန်တော်တို့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားမှာ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ဒုက္ခဆင်းရဲခံလာသည့်တိုင်အောင် အာဏာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေပေါ်မှာ သာယာပြီး မိုးပေါ်ထောင်မပြစ်ဘူး၊ တည့်တည့်ဘဲ ပြစ်တယ်ဟု လူမိုက်စကားပြောသော လူကြီး၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကတော့ ဟုတ်တာတွေကော၊ မဟုတ်တာတွေပါ သပုတ်လေလွင့် အပြောခံရသည်။
ကိုယ့်ကျင့်တရားဆိုတာကို အကန့်တွေခွဲထုတ်ဖို့ ဆရာ့တော်စာအုပ်ကို ကျော်ပြီး ကျွန်တော် မလုပ်ရဲပါ။ သူများ ပစ္စည်းမခိုးရ ဆိုသည့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဖောက်ဖျက်ပြီး လူကြားထဲမှာ မျက်နှာမပြရဲတော့ဘဲ ရှင်လျက်နဲ့ သေနေကြသော လူကြီးတွေ။ လူ့လောကကြီးက အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ကိုယ့်ကျင့်ကောင်းမွန်မှုကို တောင်းဆိုလွန်းလှသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းသောသူတွေ ကျတော့ရော။ ဘာလုပ်လုပ် အောင်မြင်တာလား။ ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပြန်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းကောင်း၊ ပညာဥာဏ်ကြီးကြီးဖြင့် ဦးဆောင်နေပါလျက်နှင့် ခါးအောက်ပိုင်း လက်သီးတွေ ထိုးချင်နေကြတာ စိတ်ဆင်းရဲစရာ။ ကျွန်တော်တို့က ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ စာအုပ်တွေထဲမှာ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းသောသူက ယုတ်မာ ကောက်ကျစ်သော လူတွေကို အနိုင်ရသွားခြင်းတွေမှာ ကြေနပ်အားရကြသည်။ အပြင်လောကမှာတော့ စုတ်ပဲ့သော လူများက အနိုင်ရသွားခြင်းတွေလဲ အများကြီးရှိပါသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ယခု ကမ္ဘာမှာ ပြောနေကြသည့် လူ့အခွင့်အရေးကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိသည်။ လူဆိုသည့် သတ္တ၀ါ ဖြစ်တည်လာလျှင် အသားမဲတာ၊ မမဲတာ၊ ၀ါတာ ၊ မ၀ါတာ ဘေးချိတ်။ ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေး အပြည့်ရ ရမည်ဟု ဆိုကြသည်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ…လွတ်လပ်စွာ။ လွတ်လပ်စွာတွေ အလွန်များသော အကြောင်းခြင်းရာတွေပေါ်မှာ အကျင့်ကောင်းသော လူများ ဦးဆောင်လျှင် ပိုပြီး နေသော ထိုင်သာရှိသော လူ့ပါတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်လာသည်။ ပိုပြီး ခြေခင်း လက်ခင်းသာသော နေ့များ ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် အကျင့်တန်သော ဗီဇနှင့် လွတ်လပ်စွာတွေ ရောရှက်လာသော အခါ အလွန်စိတ်ညစ်ဖွယ်ကောင်းသော အမှုအခင်းများ ဖြစ်လာကြသည်။ ထိုအပေါ်ကိုမှ မာန်မာန တစ်လွဲတွေ၊ အတွေးအခေါ် အမှားတွေ ပေါင်းထည့်ပြန်သောအခါ ရှင်းမနိုင်တော့သော၊ ဘယ်တော့မှ မပြီးဆုံးတော့သော ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်။
ဆိုကြပါစို့။ ပြီးခဲ့သော မိထ္ထီလာ အရေး အခင်းကြီး ဆိုပါစို့။ ဘေးပရောဂတွေ၊ လူတွေ အလန့်တကြား ဖြစ်မှ၊ သေကြ ကြေကြမှ စိတ်ချမ်းသာကြသော လူ့အန္ဓများကို ဘေးချိတ်။ အရေးအခင်း စဖြစ်သည် ဆိုသည့် အကြောင်းအရာပေါ်မှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးကြည့်မိသည်။ မွတ်ဆလင်တွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ခဏဘေးဖယ်ထား။ ကိုယ်ကျင့်တရား စုတ်ပဲ့သော လူ့လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကြောင့် ဖြစ်လာသည်လို့ တွေးလို့ရမည်။
ထိုအခြင်းအရာကိုမှ ကိုယ်ကျင့်တရား စုတ်ပဲ့သော လူများက ဟုတ်တာတွေကော၊ မဟုတ်တာတွေပါ ထပ်မံပြီး ဖွကြသော အခါ တည်ငြိမ်ခြင်းပျက်ပြားရသည်။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်သော အမုန်းတရားတွေ လက်ဆင့်ကမ်းကြသည်။ အားပေးအားမြှောက်ပြုကြပြန်သည်။
ကျွန်တော်က ဆရာတော်ကြီး၏ စာအုပ်ကို မဖတ်သေးဘဲ အတွေးနယ်ချဲ့မိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုသော ဘာသာရပ်ကို သရုပ်ခွဲပြဖို့ ကျွန်တော်လို လူသာမာန်များ ဥာဏ်မမှီတာ သေချာပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အော်ကြီး ဟစ်ကျယ်ပြောနေကြသော နိုင်ငံကြီးတွေက နိုင်ငံသားတွေကရော နိုင်ငံသား အချင်းချင်း လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ကြသလား။ သံသယ၀င်စရာ၊ ထောက်ပြစရာတွေ အများကြီးရှိပါသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားဟူသည့် စကားလုံးကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ စာစီနေရသော ကျွန်တော့်လက်တွေက ယားယံလာသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဗျ ဟု ပြောနေကြသော လူတွေကို ဟားတိုက်ချင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ လူတိုင်း လိုက်နာနိုင်သော အလွန်ရိုးရှင်းသော စကားလုံးရှိပါသည်။ ဒီစကားလုံးက အလာအရှင်မြတ်ရဲ့ သားတော်တွေ၊ ယေရှုခရစ်ရဲ့ သားတော်တွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ ဘယ်ဘာသာကိုမှ မယုံကြည်သော လူတွေ အားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုစကားလုံးကတော့ ကိုယ့်ကို သူများ လာလုပ်လျှင် မကြိုက်သော အပြုအမူတွေ၊ ကိုယ့်ကို သူများက တွေးလျှင် မကြိုက်သော အတွေးတွေ ကို သတိပေးနေသည့် "ကိုယ်ချင်းစာစိတ်" ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားတည်းဟူသည့် အလွန်ခက်ခဲ့သော စကားလုံးကို မပြောခင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး အရင်မွေးဖို့ ကျွန်တော်အများကြီး ကြိုးစားရပေအုံးမည်။
(Photo Credit -http://mybindi.typepad.com/.a/6a00df351d77948833017617804a29970c-800wi )
Posted by Maung Yit at 9:48 PM0comments
Labels: Essays, Po Htet
Suu's Daily publishing very soon
သတင်းကောက်နုတ်ချက်။ မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၃
Posted by Maung Yit at 9:40 PM0comments
Mar Mar Aye - 473
"ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်" အမှတ် (၄၇၃)
နှုတ်ဆက်ပွဲ၊ တင်မိုး (၆)နှစ်မြောက်
မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၃
(photo: Mya Thandar's facebook)
သောတရှင်တို့ရေ … မာအေးတော့ ကိုယ့်အိမ်ကလေး ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်ရွာကလေးကို ချောချောမောမော ပြန်ရောက်နေပါပြီ။ အများသူငါ ပို့သတဲ့မေတ္တာပါဘဲ။
နေကေါင်းကျန်းမာရှိပါတယ်။ ချစ်စွာသော ပြည်သူ ပရိသဒ်အပေါင်းတို့တွေလဲ အစစ အရာရာ အေးချမ်းသာယာ မင်္ဂလာရှိပါစေရှင်။ မပြန်ခင်ကတည်းက လွမ်းရစ်ဦးတော့မှာဘဲဆိုတဲ့ ရောင်းရင်းတို့ကိုလဲ သွားလမ်းသာလို့ ပြန်လမ်းလှတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ မကြာမကြာ ကျိုးစားလာမှာပါလို့ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း တည်မှာပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့ သုံးလ ဆိုတာ ဘာမှ ကြာလိုက်တယ်မထင်ဘူး။ ဘယ်မှလဲ သိတ်မရောက်လိုက်ဖူး။ မိတ်ဆွေတွေ အသိတွေနဲ့လဲ သိတ်မတွေ့ဖြစ်ပါဘူး။
အပြင်ရောက်တာ ကြာတော့ လိပ်စာတွေမမှတ်မိ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေလဲ မသိတော့လို့လေ၊ မှတ်မိသလေါက်ကလေးတောင်မှ ကိုယ်က လိုက်မတွေ့နိုင်၊ သူတို့လာကြပြန်တော့လဲ
ကိုယ်က ရှိမနေတော့ လွဲချည်းနေမှာလို့ တွေးမိပြီး ဆုံချင်သူတို့ ဆုံလို့ရအောင် နှုတ်ဆက်ပွဲလေးတပွဲ လုပ်မယ် လို့ အချိန်စောင့်နေခဲ့ရပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၈) ရက်နေ့ကတော့ နှုတ်ဆက်ပွဲလေး အထမြောက်သွားပါတယ်။ ဖိတ်စာလိုလိုလေးပေါ့။ ကိုယ့်လက်ရေးနဲ့ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ စာရွက်ကလေးတွေကို မြေးငယ် မမိဖူးက လက်စွမ်းပြပေးတာဘဲ။
ရတဲ့သူလဲရ မရတဲ့သူလဲမရတော့ ဖြစ်ဦးမှာဘဲပေါ့။ ကိုယ်ခွဲက သိတ်မရှိတော့ သိပြီးတဲ့သူက တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေကို တဆင့်ပြီးတဆင့် ပြောပေး နှုတ်ဖိတ်ကလေးလဲ လုပ်ပါတယ်ရှင်။
မာအေးတို့တွေ အသံအလှူပေးနေကျဖြစ်တဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တည်တော်မူခဲ့တဲ့ တိနိကျောင်းတော် ငွေရတုခန်းမမှာပါ။
မာအေးရဲ့ သီချင်းပွဲတွေမှာ ငွေလက်ဆောင်တွေလဲ ရခဲ့တော့ စေတနာရှင်တွေလဲ ၀မ်းမြောက် သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေရယ်လို့ သာသနာရေး လူမှုရေး အဖွဲ့တချို့ကို လှူဖြစ်ပါသေးတယ်။ ကျောင်းရှိ သံဃာကုန် ဆွမ်းလုပ်ကျွေးပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေကို ကျွေးတဲ့နေရာမှာတော့ မျက်နှာလိုက်သလို ထင်ကြမှာ ထင်ပါရဲ့။ မြောင်းမြဒေါ်ချို မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးတာကိုးရှင့်။ အဆင်သင့်သွားတာလဲ ပါပါတယ်။ မြောင်းမြအသင်းကလဲ မြောင်းမြသူ မာအေးဆီလာတာပေါ့။ အဲဒီမှာ သူတို့ ညီအမ မိသားစုတွေလဲ လူမှုရေး သာသနာရေးကိစ္စတွေ ကူညီနေတာတွေ့တော့ ဖြစ်တာတင်မက မုန့်ပါကျွေးဖြစ်သွားတာပါဘဲ။
အားလုံးလဲ ရောက်လာကြ စါးကြ ပြောနဲ့ အတော်ပျော်ကြပါတယ်။
သွားလေသူ ဂီတ အကိုတော်တွေလဲ ကုန်သလေါက်လို့တောင် ပြောလို့ရနေတော့ သတိရလိုက်မိတာနဲ့ အရင့်အရင် ဆုံကြရင် အော်ဟစ်နောက်ပြောင်ခဲ့သူတွေ မပါတော့ပါလား ဆိုတဲ့ ရင်တွင်းကြိတ်နဲ့ ဆွေးချင်ကြပါတယ်။
ကိုယ်လဲ တနေ့ လို့ သံဝေဂ ယူရတာပေါ့ရှင်။
နောက်တပါတ်အတွင်းမှာ ကဗျာဆရာ ဖလ်မီးအိမ်တင်မိုး အတွက် ကျန်ရစ်သူတွေက ရောင်းရင်းများက မမေ့တဲ့နေ့လေး လုပ်ပါတယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ကဗျာမိုးရဲ့ ပွဲမို့လဲ မာအေး ဒီအခန်းအနားကို သွားတက်ခဲ့တာပါဘဲ။
ပန်းချီဆရာ ယဉ်မင်းပိုက် ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ - တင်မိုးရဲ့ အပြုံးဟာ မြန်မာလွယ်အိတ်လေးတွေပေါ်မှာ အထင်အရှား ငါ့ကို ခေါ်သွားလို့ ပြောနေတဲ့အလား ခံစားမိတယ်။
အမှတ်တရ ကဗျာစာအုပ်လဲ ဝေငှပါတယ်။
ဆရာတင်မိုး အကြောင်းတွေကို ဆရာ့အရင်းအခြာတွေဖြစ်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင် စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ မောင်မိုးသူ၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် နဲ့ တောင်စွန်းဆရာတော်ဘုရားတို့က ပြောပြဘို့ရှိပါတယ်။ မာအေးလဲ ရောက်သွားတော့ အပြင်ကမ္ဘာမှာ ခင်လာရှာတဲ့နှမမို့ ၀င်ပြောခွင့်ပေးကြပါတယ်။
မာအေးအလှည့်ကျလို့ ပြောဖို့ စတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ ဆို့တက် ငိုချင်လာတာကို အတော် ပြန်ထိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ပြန်ရောက်ပြီ၊ သူကတော့ သူအင်မတန့်အင်မတန် ပြန်ချင်တဲ့ ချစ်တဲ့မြေကို ခြေမချခဲ့ရလေခြင်း ဆိုတဲ့ ယူကြုံးမရစိတ်ကြောင့် ကြေကွဲလွန်းလို့ပါ။
အမှတ်တရ ကဗျာစာအုပ်မှာ မာအေးရေးတဲ့ ကဗျာလေးတွေ့ပါတယ်။ မဆုံးသေးတာက တွေ့တာနဲ့ ပါလာတဲ့ မာအေး မှတ်စုစာအုပ်ကလေးထဲက - ကဗျာမိုးကြီးတောင်ကွယ်တာ (၂) နှစ်မြောက်ချိန်မှာ ရေးတဲ့ ကဗျာလေးကို ထုတ်ပြီး ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
'(၂) နှစ်ပြည့်ကဗျာမိုးအမှတ်တရ' လို့ ခေါင်းစဉ် ပေထားတဲ့ကဗျာပါ။
* ပွဲဝင် စင်တက်၊ ၀ိညာဉ်လက်တို့၊
အကို့နေရာ၊ လပ်ရှာသိ (၂) နှစ် ရှိပြီ၊
* ကသီလင်တ နှိုင်းမရသော
မြိုင်ရပ်ကိုနှင်၊ ကဗျာဆင်လိမ့်" ပြောချိမ့်ချိမ့်၊
* တသိမ့်သိမ့်ဝေး၊ နုအေးညင်သာ
* သော့သောရမ်းရမ်း၊ ရေလွှမ်းဒီရိုက်
ကူဖေးမနိုင်၊ လက်မှိုင် မျက်ရည်
တို့တွေကျရာ၊ သူ မပါတာ၊ ကံကေါင်းတာပေါ့။
* ကန်တော့ရည်မှန်း၊ ဆွမ်းပန်းကပ်လှူ
ခွပ်ဒေါင်းပီပြင်၊ မြန်မာခင်လော့ ။ ။
နှစ်ထောင့်ကိုးခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက်၊ မနက် ကိုးနာရီခွဲက စန်ဖရန်စစ်စကိုမြို့ရောက် 'မောင်ရစ်'တို့ အိမ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါရှင်။